Ngaba uyazi ukuba ... "Ukubhala kakuhle kuhle"? | Iindaba zeGajethi
Ukubonakala kwezixhobo eziphathwayo kunye nokwanda kwenethiwekhi yemiyalezo ekhawulezileyo enje ngeWhatsApp okanye iTelegram, kunye neenethiwekhi zentlalo ezinje ngeTwitter, kunye nokusikelwa umda koonobumba abali-140, kukhokelele abasebenzisi abaninzi kubukrelekrele ukuze bakwazi ukuveza into abayifunayo, ukubhala ngokungalunganga ngokuthe ngqo, Ukugqitha kwiArc de Triomphe eyona mithetho isisiseko kunye nemithetho yokuqala yopelo lweSpanish.
Into esiyivezayo kwiiblogi, iinethiwekhi zentlalo kunye nabanye, ibalulekile njengeprojekthi yedigri yokugqibela, iyafumaneka kuye nabani na ukuba ayibone, kwaye kufuneka ibhalwe ngokuchanekileyo. Ngale nto, uWiko kunye noLa Vecina Rubia badibene kwaye basungula isicelo, phantsi kwesihloko Ukubhala kakuhle kuhle, Iinjongo zokufundisa abasebenzisi be-intanethi kunye nezixhobo eziphathwayo ukuba babhale kakuhle, kulungile, baphakamise ulwazi kwaye bafundise, nto leyo abayifunayo ngokwenene abanye abantu.
Ukubhala kakuhle kuyinto entle ... kwaye mhle, umbi kwaye umbi, utyebile kwaye ulibhityile, mhlophe kwaye umdaka ...
Uyasikhumbula eso sibhengezo sesiselo esinxilisayo esidumileyo? Ewe, sinokusebenzisa eso slogan apha, kuba Ukubhala kakuhle kubalulekile, ukuba kungabonakali nje kungenangqondo. Sonke siyazenza iimpazamo, kwaye kokukhona ubhala, kokukhona kunokwenzeka ukuba uzenze. Kodwa kukho iimpazamo, kunye neempazamo.
Ukubhala kakuhle kuhle sisicelo esitsha «esenziwe nge-glitter ukuze ubhale kakuhle kwiselfowuni kwaye ube neenwele ezinkulu» oko ivele Ukusuka kwimanyano yeWiKo, umenzi wetekhnoloji, kunye noLa Vecina Rubia, iprofayili ehlekisayo ku-Twitter enabalandeli abaphantse babe zizigidi ezibini kwaye eyona nto ikhathaza kakhulu ebomini "kukuba neenwele ngengqondo ngaphantsi."
Isicelo ngoku siyafumaneka kwiVenkile yokuDlala yezixhobo ze-Android, kunjalo Isimahla kunye nohlobo lolwazi. Injongo, bayakhomba kwi-Wiko, ngu «yenza abasebenzisi bazi ngokubaluleka kosetyenziso olufanelekileyo lopelo, ukubhala negrama ngee-smartphones«.
Kungenxa yoko le nto usetyenziso lubonelela "Iirubiti" okanye iingcebiso malunga neendlela eziphambili zokubhala ulwimi lweCervantes, «IiRubiconsultas» ithunyelwe nguLa Vecina Rubia kwi-RAE, esungulwe yi-blogger kwi-RAE uqobo, «Amabali eRubiurbanas» ngeentsomi ezingeyonyani malunga nokusetyenziswa kolwimi lwethu, kwaye "Umdlalo weBlondes", umdlalo apho uya kuba nakho ukuvavanya ulwazi olufunyenweyo.
Khumbula, ukuba mhle okanye uyinzwana, ukuya kwifashoni yamva nje, okanye ukuba neenwele ezintle uHilario Pino angathanda ukuzenza, akuchasene nokubhala ngokuchanekileyo. Ngendlela, ubuya kuba nakho ukufumanisa impazamo yopelo endiyifakile kule post? Jonga sendide ndayiguqula yabomvu?
Ukubhala kakuhle kuhle
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Ngaba uyazi ukuba ... "Ukubhala kakuhle kuhle"?
UBenjamin Doodle sitsho
Ewe, jonga, uJosé: Kuya kufuneka usebenzise kungekuphela isicelo, kodwa ngokuthe ngqo kwiDikshinari yeRAE, kunye nePan-Hispanic yamathandabuzo kunye neSpanish-isiNgesi-iSpanish.
Uzithumele ngaphezulu kwempazamo enye kwesi siqwengana senqaku eliphantse lahlazisa kakhulu.
Andinakuba blonde okanye mhle okanye ndibhale i-tweet okanye ndenze i-pseudo-famous, kodwa ndiyazingca ngokuthatha umsebenzi owaneleyo wokunika iinkcukacha ngobukhulu obufana nobakho, obungenazintloni ukomelezwa yinethiwekhi.
I-PS: Kwakumalunga nexesha apho iplatinam, iimoto ezipeyintiweyo zithathe umsebenzi wokongeza into ethile kumzimba wazo (ngenxa yoko isiphumo asihlali okanye singcamle isityebi).
Enkosi ngento, huh ?!
Phendula uBenjamin Garabato
Molo uBenjamin Garabato. Enkosi kakhulu ngengcaciso yakho. Ngokungafaniyo nawe, ndinombulelo kwinto endingayithandiyo, nokuba amazwi akho abonisa ukungabi nantlonelo. Kucacile ukuba ukubhala kakuhle, okwenzayo, akufani nokuziphatha okuhle.
Ngendlela, le app, nokuba awuyithandi, imalunga nabantu ababhala ngokuchanekileyo ngaphandle kokwenza upelo okanye iimpazamo zegrama, hayi malunga nokuzalisa uluhlu lwezichazi ezingafunekiyo ezingacacisiyo okanye ezinikezela ngolwazi.
Enkosi ngokubulala amaxesha enesithukuthezi egxeka iposti yam. Ndiyayithanda!
I-PS: ngeSpanish, isikhuzo kunye neempawu zemibuzo zibekwa ekuqaleni nasekupheleni kwesivakalisi. Kwaye emva kwekholoni, kubhalwe ngoonobumba abancinci, ubuncinci kwimeko apho uyenze ngokuchanekileyo. Ingakanani intetho, kodwa emva koko ...
Ndikushiya amakhonkco ukuze kule mpelaveki uchithe ixesha elincinci ufunda yomibini imigaqo kwaye, kwixa elizayo, musa ukuwela kwisidenge: http://www.rae.es/consultas/ortografia-de-los-signos-de-interrogacion-y-exclamacion y http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=2a3yRXFBiD6rvDOMtq